Gakava: Akashinga browser anowedzera ekuendesa makodhi kune typed URLs | Linux Vakapindwa muropa
Gakava: Akashinga browser anowedzera ekuendesa makodhi kune typed URLs
Iyo yakavhurika sosi bhurawuza Shinga, iyo inozivikanwa nekutarisisa kune mushandisi zvakavanzika, yakabatwa ichiwedzera ekuendesa makodhi kuma URLs ayo akanyorwa mukati mekero bar.
Twitter mushandisi @ cryptonator1337 Izvo zvakacherechedzwa kuti kana mumwe munhu akapinda binance.us kero nemaoko mune kero bar, Akashinga auto anozadza iyi URL nekodhi yekuendesa.
Kunyangwe iyi isiri nyaya yekuvanzika, hachisi chinhu chinotarisirwa nevashandisi kubva kuchikumbiro chakasimba pane 'kuzara pachena' kwekushanda kwayo.
Ehe, mareferensi macode haana kungowedzerwa paBinance, izvi zvinoitikawo kune mamwe masaiti senge Ledger, Trezor, uye Coinbase.
Iko kugadzirisa kuri munzira
Akashinga muvambi uye aripo CEO, Brendan Eich, apindura pa Twitter achitsanangura kuti nyaya iyi iri kugadziriswa izvozvi uye Muchidimbu chinotevera kodhi dzekuendesa dzichabviswa zvachose
"Tine kudyidzana naBinance semubatanidzwa, kodhi inotizivisa, kwete iwe", Ndinopindura pasocial network.
Pakutanga kwegore, Akashinga uye iyo cryptocurrency sevhisi Binance yakasaina chibvumirano chinobvumidza vashandisi kutengesa macryptocurrencies mune nyowani yebrowser tab pasina kudiwa kweimwe application.
Sezvakatsanangurwa mumasocial network akasiyana akatevera nhau, maodhi emasaiti aya anowedzerwa zvese panharembozha nedesktop. Kugadziriswa kuri munzira, isu tinotarisira kuti ichasvika chero nguva pane ese mapuratifomu anoenderana neBrave.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Gakava: Akashinga browser anowedzera ekuendesa makodhi kune typed URLs
Mhoro. Ini ndiri mushandisi mutsva weBrave uye ndakanyoresa muUpold uye chokwadi ndechekuti kundiongorora zvinondibvunza mufananidzo wegwaro rakadai seID, Pasipoti kana zvakafanana uye pikicha yangu yerudzi rweID Yakakodzera sei Uphold? Ini ndinobvunza nekuti ini ndinoona kuti kukumbira kworudzi urwu rwezvinyorwa kwakakomba. Pane chero munhu angandipa zano?
Iyi tsika yakajairika mumazhinji masevhisi e cryptocurrency. Ini ndakanyoresa gore rapfuura uye ndakanga ndisina dambudziko.
Kana iwe uine chinyorwa chekare chegwaro iwe unogona kushandisa icho kutora seyambiro yekuwedzera.
TrueNAS SCALE, iyo FreeNas inoshandisa Linux uye yakavakirwa paDebian 11